Igba efere nkedo na ihe eji atụ igwe na ndị na-eweta ya na ụlọ ọrụ - China wụchara efere efere na igwe ihe eji emepụta ihe
Aka - ihicha nkedo n'elu igwe eji eme ihe (1) Kwesịrị ekwesị maka nyocha dị iche iche na ụgbọelu benchmark maka nha ziri ezi. (2) Ejiri ọtụtụ ebe dị ka akara nlele maka nyocha akụrụngwa akụrụngwa yana iji nyochaa ogo ziri ezi ma ọ bụ ihe dị iche na-agba ọsọ na ọrụ nke ịme usoro ziri ezi. (3) Ọ bụ ihe dị mkpa iji tụọ igwe n’ichepụta igwe. Igba ígwè n'elu efere tumadi ji ígwè ọrụ, igwe ngwá ọrụ osisi n'ichepụta, ngwá electronic, electric ike, a ...
Igba Iron lapping efere na-ọtụtụ-eji maka ezi aka-lapping nke ferrous na-abụghị ferrous akụkụ iji nweta a zuru okè elu ụdị & flatness Nkedo-ígwè n'elu efere na-now-eji na mmepụta ala dị ka ngwá ọrụ maka lapping konkiri n'elu efere iji nweta ụfọdụ akara ule ziri ezi. Ngwongwo a na-ekwe ka ya tinye ya na mgbasa ozi lapping n'elu nnukwu ala dị larịị. Elu nwere ike ịdị larịị nke iwepụ ọkụ, akara na nhazi ọrụ. Ọzọkwa n'elu sọfụ ...
T slotted nkedo ígwè efere anyị T-slotted igba ígwè / ígwè n'ala efere na-eji dị ka isiike na nkenke bases na engineering ọrụ maka benchmarking, layout, nkenke mmesho, nzukọ ọrụ, arịọnụ ọrụ maka equipments nzukọ, refurbishements wdg Ọzọkwa ndị a Tslotted nkedo Enwere ike iji efere ígwè mee efere akwa maka igwe ihe na-agwụ ike, igwe gingry / igwe igwe wdg. A na-ejikwa ha dị ka akwa ule iji kwado injinia, motọ, compressors, nfuli, valvụ, nnukwu igwe, transm ...